Sida laga soo xigtay Mark Gurman Aqoonsiga Face-ka kuma imaan doono cusbooneysiintan iMac | Waxaan ka socdaa mac
Xogta xanta iyo xanta ah ee laga bilaabay Bloomberg ee Mark Gurman, oo ku saabsan wax soo saarka Apple ma joojinayaan imaanshahooda. Markan shirkaddu waxay umuuqataa inay jiil kale uqaadanayso hirgalinta dareenka wajiga ee lasoo bandhigay markii ugu horeysay ee iPhone X.
Waa hagaag waxay u muuqataa in ugu dambeyntii sida laga soo xigtay warbixinta Gurman iMac kuma dari doono dareemahan furitaanka moodooyinka cusub ee iMac taasi waxay ku dari doontaa isbeddelo kale oo muhiim ah sida ciribtirka qeybta hoose ee birta, qaabka fidsan ee dhabarka iyo xitaa ku dhowaad wadarta guud ee baabi'inta shaashadda shaashadda.
Sida ku cad xogaha ugu dambeeyay Moodooyinka cusub ee iMac ayaa beddeli doona moodooyinka hadda jira ee 21,5 iyo 27-inji ah si ay u dhexeeyaan 23 iyo 24 inji. Laakiin tani maahan mid muujineysa hirgelinta Aqoonsiga Face ID in kasta oo ay run tahay in bilowga xanta ay umuuqatay in dareemahan uu ku imaan doono isbeddelkan ugu horreeya ee muhiimka ah ee aaladda Apple ee dhan-ka-mid ah.
Xaqiiqdii isbeddelada ku dhaca iMac ma ahan kuwo aad u tiro badan tan iyo markii ay 2012 noqdeen kuwo aad u khafiifsan calooshaas oo ku taal dhabarka. Afka hore wuxuu la mid yahay sidii aan yeelnay 2009 oo waxay umuuqataa in sanadkan ay dooran doonaan isbeddel weyn oo naqshad leh oo la mid ah khadka iPad Pro ama kii ugu dambeeyay ee iPhone 12.
Waxa Gurman dafiray hadda waa in Aqoonsiga Face-ka uu gaari doono kooxo sanadkan sidii lagu caddeeyay MacRumors. Waxay lahaan doonaan dhowr horumar iyo dabcan processor-rada cusub ee Apple M1 oo ay weheliyaan GPU-yada cusub ee aadka u awood badan, laakiin qaabkan furitaanka waa inay sugaan. Waan arki doonnaa haddii isbeddelladan ay dhacaan inta u dhexeysa hadda iyo deyrta sannadkan, taas oo ah goorta iMac sida caadiga ah la billaabo.Laakiin Gurman badanaa wuu ku fashilmaa wax yar saadaashiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » iMac » Sida laga soo xigtay Mark Gurman Aqoonsiga Face-ka kuma imaan doono cusbooneysiintan iMac
Horyaalkii xilli ciyaareedkii labaad ee "Addoon" wuxuu labanlaabmayaa dhagaystayaasha marka loo eego kii ugu horreeyay